भदौदेखि फिल्म हल खोल्ने तयारी, सञ्‍चालक भन्छन्, 'कतिन्जेल यत्तिकै बस्ने ?'- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
फिल्म हल खोल्ने मोडालिटी सीसीएमसीमा, निर्माता भन्छन्, 'दर्शक आउँछन् भन्ने विश्वास नभइ फिल्म रिलिज गर्दैनौं'
नयाँका साथै पुराना हिट फिल्म पनि प्रदर्शन गर्ने हलको तयारी, दर्शकलाई स्यानिटाइजर र मास्क अनिवार्य
श्रावण १४, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय खोल्ने निर्णय गर्‍यो । भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सरकारको निर्णयसँगै करिब चार महिनादेखि बन्द भएका फिल्म हलका संचालकहरु पनि हल खोल्ने तयारीमा छन् । सरकारले फिल्म हल कहिलेदेखि खोल्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
फिल्म हल खोल्ने निर्देशिका तयार पारेर चलचित्र विकास बोर्डमा बुझाइसकेको चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान बताउँछन् । 'हल खोल्ने विषयमै हामी छलफल गरिरहेका छौं । बजार बिस्तारै खोलिरहेको छ,' उनले भने, 'सरकार पनि मोडालिटी तयार गरेर छलफल गर्न तयार छ । विकास बोर्डमा गाइडलाइन एउटा बनाएर हामीले पेपर प्रिजेन्ट गरिसकेका छौं । भदौको अन्तिमसम्म हल खुल्छजस्तो छ ।'
चलचित्र बिकास वोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल पनि अब चाँडै सानो युनिटमा फिल्मको छायांकन र हल खुल्ने बताउँछन् । 'चलचित्र संघ, निर्माता संघ, प्राविधिक संघ, कलाकार संघले हल खोल्ने भनेर मोडालिटी दिनु भएको थियो । हामीले पनि विभिन्न देशको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेरेर मोडालिटीमा थपथाप गरेर 'कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमटी'मा पठाइसकेका छौं । त्यहाँ छलफल पनि भएको छ,' उनले भने, 'मेरो विचारमा अब चाँडै हल खुल्छ । हाम्रो भीडभाड हुने क्षेत्र हो त्यसैले त्यससम्बन्धि निर्देशिका निकालेर सरकारले अनुमति दिन्छ ।'
भदौबाट नै हल खुल्ने छलफल भइरहेको उनले बताए । दसैंका लागि चहलपहल बढाउन हल खोल्ने तयारीमा जुटेको चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रधानले बताए । उनले भने, 'चलचित्र क्षेत्रलाई चलायामान बनाउँदै जानु पर्योल । खोल्नासाथ दर्शक पनि तुरुन्त आउने ठाउँ पनि हाम्रो । दसैंका लागि चहलपहल बढाउन हल खोल्ने तयारीमा छौं । हल नखोली कति बस्ने ?'
हल खोलेपछि डिजिटलाइज गरेका पुराना र पछिल्लो समय हिट भएको फिल्म प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको प्रधान बताउँछन् । उनका अनुसार हल सञ्चालकले सुरुमा 'छक्का पञ्जा', 'कबड्डी कबड्डी', 'नाईं नभन्नु ल ५' जस्ता फिल्म प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि हलको ढोकामा स्यानिटाइजर लगाउने, दर्शकले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने र हलका कर्मचारीले फेस सिल्ड लगाउनुपर्ने जस्ता निर्देशिका बनाइएको उनले बताए ।
हलभित्र दर्शकहरुबीच भौतिक दूरी कायम गर्न एउटा सिट छोडेर दर्शक राख्ने योजना बनाएको उनी बताउँछन् । अकुपेन्सीका हिसाबले ५० प्रतिशत दर्शक राखेर फिल्म देखाइने प्रधानले बताए । 'अकुपेन्सीको हिसाबले ३३ प्रतिशत राख्ने कुरा चलिरहेको थियो । तर, हामीले बिकास बोर्डमार्फत् ५० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौं सरकारसँग । त्यस्तै ५० प्रतिशत हुन्छ होला,' उनले भने।
सेयरका सवालमा भने पहिलो हप्ता ५० प्रतिशत सेयर बाँडफाँड गरिनेछ । भदौदेखि हल खोल्ने छाँटकाँट देखेसँगै हलवालालाई फिल्मको अभाव हुने उनी बताउँछन् । 'हलमा देखाउन त प्रमुख त कन्टेन चाहियो । कन्टेन्ट नै छैन,' अध्यक्ष प्रधानले भने, 'यसपालि नाफामा नगए पनि घाटामा नजान हल खोल्ने तयारीमा लागेका हौं । व्यवसायको स्थिति खराब छ । हल खुल्यो है भन्ने जानकारी दिन पनि हामी हल खोल्छौं ।'
निर्माता, निर्देशक तथा वितरण कम्पनी स्टेसन फाइभका सीईओ प्रचण्डमान श्रेष्ठ हलसँग दर्शक जोड्न नयाँ फिल्मको आवश्यकता पर्ने बताउँछन् । 'दर्शकलाई हलसम्म जोड्नु नै महत्वपूर्ण भएको बेलामा त कन्टेन त नयाँ चाहियो नै । अहिले त ट्रायल फेजमा छौं,' उनले भने, 'पुरानै फिल्म रिलिज गरेर एक हप्तासम्म रमाइलो हुन्छ । तर, त्यसले दर्शक आउँछन्जस्तो लाग्दैन । हल खुल्यो है भन्ने सन्देशचाहिँ जान्छ ।'
क्यूएफएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशन अडिगाले हल खोलिसकेपछि टिकटदेखि हलभित्र अनलाइन सिस्टमबाट नै खानेकुरा अर्डर गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा रहेको बताए । 'सावधानी अपनाएर हल खोल्न सकिन्छ भन्नेमा छौं । फिल्म पनि हुनुपर्योा । करोडौंको घाटा भएको छ । ‍ सावधानी अपनाएर नै हल खोल्छौं ।'
वितरक प्रचण्डमान भने हल चलाइसकेपछि हल सञ्चालकमा पर्ने भारबारे पनि बिकास बोर्डले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । 'निर्देशिका अनुसार हल चलाउँदाखेरी हल सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन ? आर्थिक हिसाबले कस्तो हुन्छ ? त्यो सबै प्याकेजमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ,' उनले भने, 'खोल भन्ने, खोलिसकेपछि २५ प्रतिशत अकुपेन्सीमा खोल भन्दा त हलको भाडा २५ प्रतिशत लिइँदैन । कर्मचारीले पनि पूरा तलब लिन्छ । कर, बिजुली खर्च हलको अकुपेन्सी घट्छ भने आर्थिक चपेटमा हलवाला पर्छन् । हल चलाइसकेपछि हलवालामा पर्ने आर्थिक भारको विषयमा बिकास बोर्डले सोचिदिनु पर्छ ।'
हल खोल्नुमात्र समस्याको समाधान नरहेको उनको तर्क छ । 'सबै व्यापार नै हो । नाफा नभए पनि घाटामा त जानु भएन हल । त्यही हिसाबले नै हल खोल्ने हो । अब खोलेरमात्र चाहिँ समस्या समाधान होलाजस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले भने।
फिल्म प्रदर्शन गर्ने मुडमा छैनन् निर्माता
'प्रेमगीत ३' गत चैत २८ मा प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो । तर, लकडाउनले गर्दा फिल्मको प्रदर्शन स्थगन भयो । हल खोल्ने तयारीमा हल सञ्चालक लागे पनि आफू अहिले नै फिल्म प्रदर्शन गर्ने मुडमा नरहेको फिल्मका निर्माता सन्तोष सेन बताउँछन् । उनले भने, 'मेरो फिल्मको बजेट ठूलो छ । अहिले हल खोले पनि दर्शक झ्याप्प आउँछ/आउँदैनन् ठेगान छैन । त्यसैले म यो वर्षको अन्ततिर प्रदर्शन गर्ने सोच बनाइरहेको छु ।'
'चपली हाइट ३'का निर्माता अर्जुन कुमार हल खोलिहाल्नु पर्ने अवस्था देख्दैनन् । गत चैत २८ मै प्रदर्शनको तयारीमा रहेको उनको फिल्म पनि कोभिड-१९ ले गर्दा स्थगन भयो । 'नेपाली फिल्मले मात्र हल चल्छ भन्ने पनि छैन । अहिले हल खोलेर दर्शक आउँछन् भन्ने विश्वास पनि छैन । त्यसकारण मैले कहिले फिल्म लगाउने भनेर खास सोच बनाएको छैन,' उनले भने, 'दर्शक नआउनु भनेको त हाम्रो फिल्म त्यतिकै मर्छ । पुरानोमात्र हुन्छ हाम्रो फिल्म ।'
'लक्का जवान'का निर्माता किरण केसी फिल्मलाई दसैं कि त तिहारमा प्रदर्शन गर्ने सोच बनाइरहेको बताउँछन् । 'भदौबाट हल खोल्ने कुरा सुनें । उनीहरु पूरानो फिल्म चलाउने तयारीमा रहेछन् । म अहिले नै फिल्म चलाउने सोचमा छैन । दसैं/तिहारमा प्रदर्शन गर्ने योजना छ ।'
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ १३:२४
जसपाकी लीलादेवी सिटौलाले लिइन् सांसदको शपथ
काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट लीलादेवी सिटौलाले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद पदको शपथ लिएकी छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शपथ ग्रहण गराएका हुन् । उनी जनता समाजवादीको तर्फबाट खस आर्य क्लस्टरबाट सांसद निर्वाचित भएकी हुन् । उनी ललितपुरकी स्थानीय हुन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायतको उपस्थिति थियो ।
पार्टी ‘ह्विप’ नमानेका कारण पार्टीको संगठित सदस्य र सांसद पदबाटसमेत हटाइएकी सरिता गिरीको ठाउँमा सिटौला नियुक्त भएकी हुन् ।
गिरीले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिएको र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न ल्याइएको संशोधन विधेयकको विरोध गरेकी थिइन् । संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा उक्त नक्सा राख्न विधेयकमाथि मतदान भएका दिन समाजवादीले पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको थियो । त्यसलाई गिरीले अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ १३:२१
यसरी भाइरल भए कलौटे र मुसी
कोरियाली फिल्ममा जम्दै गम्भीर
मिस नेपालको सम्पदा अवलोकन
'खेलौं जुहारी' को प्रसारण सुरु
डिजिटल नाटक वास्तवमै रंगमञ्च थियो त ?
नाटकमा एक किसिमको 'थ्रिल' हुँदोरहेछ : स्वस्तिमा खड्का